Global Voices teny Malagasy · 22 Avrily 2011
22 Avrily 2011
Tantara tamin'ny 22 Avrily 2011
Azia Afovoany sy Kaokazy22 Avrily 2011
Nomarihina indray ny Novruz, fialan-tsasatra hankalazaina any Iran, Afghanistan sy any amin'ireo firenena hafa, tany Azerbaijan ny 21 Martsa na dia nanomboka herinandro mialoha aza ny lanonana. Tsy niavaka akory ity taona ity, ary mbola nanakiana ny fotoana indray ny mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny Corps de la Paix(PCV) avy ao...
Amerika Latina22 Avrily 2011
Zambia: Miresaka ny Tokony Hizaràna Fimailo Any Am-ponja Ireo Siokantserasera
Afrika Mainty22 Avrily 2011
Ny olana tahaka ny VIH/SIDA sy ny olona mitovy nefa mifanambady dia olan'ny fihetseham-po any Zambia. Iry voalohany dia naka aina maro tato anatin'ny dimiambiroapolo taona farany ary itsy farany dia olana tsy sahin'ny olona resahana imasom-bahoaka akory. Ny sasany tamin'ireo Zambiana tao amin'ny Twitter, na izany aza, dia nanasongadina...
Senegaly: Hetsika “Leo izahay” hatreny an-tranokala ka hatrany an-dapam-panjakana
Senegal22 Avrily 2011
Nandritra ny hetsiky ny revolisiona arabo, nahita ny fandraisana andraikitra maromaro an'ireo tanora tezitra amin'ny aterineto ny tranokala senegaley. Nanomboka ny volana martsa, nivoaka ny tranonkala ny fanentanana ary lasa mpitarika ny fanoherana “ny mpifarimbon'asa Y en a marre”. Natsangana tamin'ny volana janoary 2011 ny “Leo izahay” noho ny hakiviana nivangongo manoloana...